पर्यटक आवागमनमा सहजता
दिउँसोको समयमा चार घण्टासम्म सार्वजनिक सवारी आवागमन बन्द गराएर सडक बिस्तारको काम भैरहेको नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा पर्यटक बसलाई भने चल्न दिइने भएको छ । विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिको भारतीय नाकाबन्दीले थला परेको पर्यटन व्यवसायलाई सडक अवरोधले थप समस्या परेको थियो । व्यवसायीहरुको गुनासोपछि स्थानीय प्रशासनले पर्यटक बसलाई पनि अत्यावश्यक सवारीको सूचीमा राखेर बन्दको समयमा पनि चल्न दिने निर्णय गरेको हो । मुग्लिन–नारायणगढ सडक खण्डलाई फराकिलो र स्तारोन्नति गर्न केही समययता दिउँसो ११ बजेदेखि तीन बजेसम्म उक्त सडकखण्डमा यातायात चल्न रोक लगाइएको छ । यसले पर्यटन व्यवसायलाई नकारात्मक असर पुगेको बताइँदै आएको छ ।
नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड नेपालको राजधानी र तराईलाई जोड्ने एकमात्र भरपर्दो सडक हो । यही सडक भएर दैनिक हजारौं गाडी गुड्दा सडक साँघुरो भएकोले विश्व बैंकको सहयोगमा उक्त सडकलाई फराकिलो पार्न लागिएको छ । २०१५ अप्रिलमा निर्माणको काम शुरु भएको निर्माणाधिन सडक सन् २०१७ को अप्रिलमा सक्ने लक्ष्य छ । आयोजना लागत दुई अर्ब ९० करोड रुपैयाँ रहेको छ । सडकखण्डको काम गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले केही समययता दिउँसो चार घण्टा सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर कामलाई तिब्रता दिइएको छ । यातायात बन्द रहने दिउँसोको समयमा वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्न स्थानीय प्रशासनले सबैलाई आग्रह गरेको छ । तर, यसको विकल्पमा प्रयोग गर्न सकिने सडकहरुको अवस्था झनै नाजुक भएकाले यातायात व्यवसायीहरुले कुरेरै भएपनि यही सडकखण्ड प्रयोग गर्ने गरेका छन् । दिउँसोको समयमा चार घण्टा सडक बन्द हुँदा सडकमा भीड बढ्नु स्वभाविकै हो । यसको मारमा पर्यटक वाहनसमेत परेका थिए । स्थानीय प्रशासनको पछिल्लो निर्णयले उनीहरुलाई केही राहत पुग्ने आँकलन गरिएको छ ।
गतवर्ष बैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनले सबैभन्दा बढी असर नेपालको पर्यटन उद्योगलाई पारेको छ । भूकम्पपछि ज्यादै न्यून संख्यामा पर्यटकहरु नेपाल आएका छन् । नेपाल आएका विदेशी पर्यटकको बसाई अवधि लम्ब्याउनु र आकर्षक सुविधाहरु दिएर धेरै पर्यटक नेपाल भित्र्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसका लागि नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको बारेमा प्रचारप्रसार र पर्यटकलाई धेरै सुविधा दिएर आकर्षित गरिनु पर्दछ । नारायणगढ–मुग्लिन सडक बन्न थालेपछि नेपाल आएका पर्यटकहरुले सडक यातायातमार्फत चितवन र वरपरका जिल्लामा जाने क्रममा निकै सास्ती ब्यहोर्नु परेको छ । स्थानीय प्रशासनको पछिल्लो निर्णयले पर्यटकलाई केही मात्रामा भने पनि आवागनको लागि सहज अवस्था बन्नेछ । यसले सडक यातायातबाट चितवन आउने पर्यटकको संख्यामा सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
बढ्दो भीडभाड र ट्राफिक व्यवस्थापन
बढ्दो शहरीकरणको कारण चितवनको मुख्य बजार क्षेत्रमा मानिसको भीड बढेको र ति स्थानहरुमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या देखिन थालेको छ । चितवन जिल्लाको सदरमुकाम भरतपुर र मुख्य बजार नारायणगढमा बढेको चहलपहलले ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या परेको हो । जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र, अधिकाँश प्रशासनिक इकाईहरु भएको, स्कूल–कलेज र स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा सहज पहुँच भएका कारण यसै पनि यस क्षेत्रमा जनसंख्याको चाप अधिक छ । त्यसको अलावा जिल्लाका अन्य क्षेत्रका मानिसहरु पनि केही न केही काम लिएर यहाँ आउनै पर्छ । सामानहरु किनमेल गर्न, प्रशासनिक काम गर्न, विरामी पर्दा होस् या कलेज पढ्न भरतपुर, बैकको काम होस् कि माल अड्डा र विकास माग्न पनि भरतपुर नआई सुखै छैन । चितवन जिल्ला मुलुककै मध्यभागमा पर्ने, यातायातको दृष्टिले महत्वपूर्ण भएकाले यहाँ सवारीको चाप बढी नै हुन्छ । यस्तोमा ट्राफिक व्यवस्थापन चुस्त पार्नु आवश्यक रहन्छ ।
न्यून जनशक्ति र अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग नहुँदा चितवनमा ट्राफिकलाई काम गर्न भने अप्ठ्यारो छ । सवारी साधनको चाप र मानिसको भीड बढे पनि आवश्यक दरबन्दी नपाउँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या पर्ने नै भयो । त्यसको अलावा ट्राफिक नियम मानेर सावरी साधन चलाउने र नियममा रहेर यात्रा गर्ने यात्रुको संख्या पनि धेरै छैन यस्तोमा सवारी साधन दुर्घटना हुने क्रम दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । सवारी साधनको चाप बढे अनुसार चितवनमा ट्राफिकको दरबन्दी छैन । अन्य जिल्लाबाट काजमा झिकाइएका समेत ४०–४५ जना ट्राफिकले मौवा खोलादेखि मुग्लिन, मुग्लिनदेखि नारायणगढ र लोथरसम्मको ८५ किलोमिटर राजमार्गमा कहाँ पो ध्यान दिनु । ट्राफिक व्यवस्थापन सहज बनाउन नारायणगढको पुलचोकदेखि लायन्सचोकसम्म सडक फराकिलो पारिएको र बिचमा डिभाईडर राखी एकातर्फीमात्र सवारी चल्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । तर, सडकमै पार्किङ, गरी राख्ने परम्परा, उल्टाबाटो सवारी चलाउने सवारी चालक र जेब्राक्रस छाडेर जथाभावी बाटो काट्ने यात्रुले ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या पारिरहेको छ ।
हुनतः चितवन ट्राफिकले पनि ट्राफिक व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने हरप्रयत्न गरिरहेको छ । अघिल्ला वर्षहरुको तुलनामा नारायणगढ बजारमा ट्राफिक व्यवस्थापन अलि राम्रो पनि देखिएको छ । उसको सक्रियताले राजश्व सङ्कलनमा बृद्धिसमेत भएको छ । पाँच–छ बर्षअघिसम्म २० लाखमा सिमित राजश्व ट्राफिक सक्रियताले गएको आर्थिक वर्षमा दुई करोड नाघ्यो । राजश्व धेरै उठ्नुले ट्राफिकको सकृयता त झल्काउँछ तर यसैको आधारमा ट्राफिक व्यवस्थापन राम्रो भएको मानिँदैन । सडक किनारमा ट्याक्सी र कारलाई पार्किङ गर्न दिएर बजारमा ट्राफिक व्यवस्थापन कसरी सम्भव होला र ?
शीतलहरबाट जोगिऔं र जोगाऔं
मंसिर महिनाको अन्तिम साता तराईका जिल्लाहरुमा ठण्डी बढेको छ र कतिपय जिल्लामा शीतलहर पनि शुरु भैसकेको छ । शीतलहरको कारण कतिपय तराईका जिल्लाहरुमा कतिपय मानिसको मृत्युसमेत हुने गरेका उदाहरणहरु छन् । भित्रीमधेशमा पर्ने चितवन जिल्लामा पनि ठण्डी मौसममा शीतलहरले समस्या पार्छ । शीतलहरबाट उत्पन्न समस्या समाधानको लागि चितवन जिल्लामा भने पूर्वतयारी गरिने भएको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति चितवनले शीतलहरबाट बच्नको लागि पूर्वतयारीस्वरुप आवश्यक पर्ने सामग्री राख्न सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिएको छ । विपद् व्यवस्थापन समितिको बिहीबार भरतपुरमा बसेको बैठकले उद्योग वाणिज्य संघलाई खाद्यान्न, रेडक्रसलाई लत्ताकपडा, जिल्ला वन कार्यालय र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघलाई दाउरा र जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई उपचारको तयारी गर्न निर्देशन गरेको हो ।
वार्ताबाटै समाधान निकाल्नु पर्दछ
पाँच नम्बर प्रदेशलाई टुक्र्याउने गरी सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएपछि त्यस अन्तर्गतका जिल्लाहरुमा शुरु भएको आन्दोलन अझै साम्य भएको छैन । सरकारी प्रस्तावको विरोधमा रुपन्देही, कपिलबस्तु, अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा, प्युठान, रोल्पा, रुकुम लगायतका जिल्लामा लगातारको आन्दोलन चलिरहेको छ । आन्दोलनको कारण त्यहाँका उद्योग, व्यवसाय, स्कूल, कलेज, बजार र सार्वजनिक यातायात सबै बन्द भएका छन् । अधिकांश जिल्लामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै आन्दोलनमा छन् । ती जिल्लाहरुमा सर्वपक्षीय समितिले आन्दोलनको नेतृत्व गरिहेका छन् । लगातारको बन्द र हड्तालले जनजीवन अस्तव्यस्त छ । तर पनि सरकारले उनीहरुको मागमाथि कुनै सुनुवाई गरेको छैन ।
सरकारले मधेशी मोर्चा र आदिवासी जनतातिहरुको माग पूरा गर्ने निहुँमा उक्त प्रस्ताव ल्याएको हो । तर, स्थानीय तहका अधिकांश सांसद र नेताहरु त्यसको विपक्षमा छन् । संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता हुने बित्तिकै प्रतिपक्षी दलहरुले संसद अवरुद्ध पार्दै आएका छन् । जसको माग पूरा गर्न सरकारले उक्त प्रस्ताव ल्याएको हो । मधेशी मोर्चाले पनि उक्त प्रस्तावलाई स्वीकारेका छैनन् । उनीहरु आफूले भनेजस्तो संविधान संशोधन नभए आन्दोलनमा जाने घुर्की लगाउँदै आएका छन् । यस्तोमा दलहरुबीचमा घनिभूत छलफल गरेर समस्याको निकास निकाल्नुको साटो सरकार किंकतव्र्यविमुढ भएर बसेको छ । लगातारको बन्द, हडतालले जनताको जीवन अत्यन्त कष्टकर बन्दै गएको छ । एक सातादेखिको बन्द र हड्ताल अझै कति दिन लम्बिने हो कसैलाई थाहा छैन । आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा त्यसलाई अनुशासित र मर्यादित बनाउन समस्या पर्न सक्दछ । बाँके, कपिलबस्तु र रोल्पामा भएका अप्रिय घटनातिर कसैले ध्यान पु¥याएको देखिँदैन ।
समग्र मधेश दुई प्रदेशको माग गरेर गतवर्ष मधेशी मोर्चाले छ महिना लामो तराई–मधेश बन्द गरायो । छिमेकी मुलुक भारतको सहयोगमा उनीहरुले आफ्नै मुलुकमाथि पाँच महिना लामो नाकाबन्दीसमेत लगाए । उनीहरुको सबैखाले हर्कतलाई ओली सरकारले अस्वीकार गरेपछि उनीहरु मधेश बन्द आन्दोलन फिर्ता गर्न बाध्य भएका थिए । नयाँ सरकार आएपछि फेरि त्यही मागले मुलुकलाई अप्ठेरोमा पारेको छ । अबको १४ महिनाभित्र तीन तहको निर्वाचन गराएर संविधान कार्यान्वयन गराउनुपर्ने जिम्मेवारी अहिलेको सरकारमा छ । मधेशी मोर्चा सहमतिमा नआउँदासम्म मधेशमा निर्वाचन गर्न कठिन छ । मधेशी मोर्चाको माग पूरा गर्दा प्रतिपक्ष दलहरु भड्किने र जिल्ला–जिल्लामा आन्दोलन चर्कने अवस्था छ । यस्तोमा सरकारले दुबै पक्षसँग वार्ता र संवाद गर्नु पर्दछ । पटकपटकको आन्दोलनबाट नेपाली जनताले धेरै दुःख पाइसके । त्यसो हुन नदिन सरकारले गम्भीर भएर वार्ता थाल्नु पर्दछ, वार्ताबाटै समस्याको समाधान निकाल्नु पर्दछ ।
अतिक्रमित जमिन खाली गराऊ
नारायणी लिफ्ट सिँचाई प्रणालीको सी नहर अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । भरतपुर – ११ बसेनीबाट शुरु भै भरतपुर–१४ को रामबागसम्म १३ किलोमिटर लामो उक्त नहर अब नक्सामा सिमित हुन पुगेको छ । उक्त नहर मासिएर कतै सडक, कतै पार्किङ स्टैण्ड, पार्टी प्यालेस, घर, आँगन र करेसाबारी बनेको छ । नहर अतिक्रमण गर्नेहरुमा ब्यक्ति, समूह, गैरसरकारी संघसंस्था र सरकारी कार्यालयसमेत रहेका छन् । सिँचाई प्रणालीले सार्वजनिक सूचना निकालेर नहर अतिक्रमण नगर्न र कसैले यसअघि नै अतिक्रमण गरेको रहेछ भने ठाँउ खाली गर्न अनुरोध गरेको छ । तर, त्यसलाई कसैले वास्ता गरेका छैनन् ।
नारायणी लिफ्ट सिँचाई प्रणालीले हालै गरेको सर्वेक्षण अनुसार सी नहरको भरतपुर कारागारदेखि हाकिमचोकसम्म एक किलोमिटर भाग पुरिएर पक्की बाटोमा परिणत भएको छ । हाकिमचोकदेखि बुद्धचोकसम्मको भाग पनि पुरेर बाटो बनाइएको छ । भरतपुर मेडिकल कलेज अगाडिको भागमा नहर पुरेर पार्किङ्गस्थल बनाइएको छ । नहरचोक नजिकै नहरमै चौतारो निर्माण गरिएको छ । आफ्नो घर नजिकको नहर पुरेर खेती लगाउने र व्यक्तिगत काममा प्रयोग गर्नेको संख्या धेरै छ । नहरको जग्गा अतिक्रम बी नहरमा पनि भएको छ । भरतपुर–१४ कल्याणपुरमा बी नहरको एक किलोमिटर जमिन अतिक्रमण गरी बस्ती नै बसेको छ । भरतपुर–१४ कै तोरीखेतमा उपमहानगरपालिकाले नै नहर पुरेर सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरेको छ । केही वर्षयता भरतपुरका कृषियोग्य जमिनहरु प्लटिङ गरेर घडेरी बनाउन थालिएपछि नहरको पानी आवश्यक भएन । शहरीकरणको कारण नहर प्रयोगविहीन भएपछि नहरमाथि अतिक्रमण बढेको हो । सबैभन्दा बढी नहर अतिक्रमण २०६२ सालदेखि २०६४ सालसम्म भएको प्रणालीले निकालेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । नहर अतिक्रमण रोक्न विभिन्न प्रयासहरु गरिएपनि अधिकांश निष्फल भएका छन् ।
कुनै पनि सरकारी जमिन मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना अरु कसैले भोगचलन गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था छ । कसैले बलजफ्ती सरकारी जमिन अतिक्रमण गरेको रहेछ भने त्यो दण्डनीय अपराध मानिन्छ । तर, प्रणालीले नहर अतिक्रमण गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । शुरुकै अवस्थामा नहर अतिक्रमण गर्नेलाई कारबाही गरेको भए, एक–दुई जना कारबाहीमा पर्दथे तर अरुले अतिक्रमण गर्न डराउँथे । तर, त्यसबेला कसैले त्यतातिर ध्यान दिएन । यतिखेर नहर अतिक्रमण गर्नेको लिष्टमा सयौं व्यक्ति र समूह परेका छन् । तिनलाई कसले कारबाही गर्ने ? र, अतिक्रमित जमिन कसले खाली गराउने ? यस्तोमा नारायणी लिफ्ट सिचाई प्रणालीले स्थानीय वासिन्दा, संघसंस्था, निकाय र प्रशासनसँग मिलेर अतिक्रमित जमिन खाली गराउने प्रयास थाल्नु पर्दछ । होइन भने अतिक्रमणको क्रम अझै बढ्नेछ ।
वहुसंख्यक किसान नठगियुन्
चितवन जिल्लामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रम सुरु भएको छ । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई कृषिजन्य उद्योगमा रुपान्तरण गरी आधुनिक, व्यावसायिक, दिगो एवम् आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकासका लागि परियोजनाले जिल्लामा सवा सात करोड रुपैयाँको खर्चिने जिल्ला कृषि विकास कार्यालय चितवनले जनाएको छ । परियोजना अन्तर्गत चितवनमा पकेट, ब्लक र जोन गरी तीन कार्यक्रम सञ्चालित छन् । पकेट क्षेत्रमा जिल्लाका ७० स्थानमा व्यावसायिक बाली कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । ब्लक कार्यक्रम अन्तर्गत धान र माछाको कार्यक्रममात्र सञ्चालन हुनेछ । यस्तै ब्लक परियोजनाबाट कृषि उपकरण तथा औजारको सेट, उन्नत बिउ, रासायनिक तथा प्राङ्गारिक मल, प्रशोधन, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ् तथा माछा पोखरीका लागि अनुदान दिइने छ ।
चितवन जिल्ला मुलुकमै व्यावसायिक कृषिका लागि अग्रणी मानिन्छ । परम्परागत रुपमा गरिने खेतीको अलावा चितवन जिल्लाले व्यावसायिक तरकारी खेती, कुखुरापालन व्यवसाय, मौरीपालन, पशुपालन, माछापालन, रेशमकिरापालन, बीउ उत्पादन, केरा र फूलखेती लगायतमा मुलुकमै अग्रस्थान ओगटेको छ । कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन सके चितवन जिल्लाले अझ धेरै प्रगति गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ । तर, सरकारले कृषिमा लगानी बृद्धि गरेको छैन । खेतीयोग्य भूमिमा बालुवा छरेर घडेरी बनाउँदा पनि सरकार टुलुटुलु हेरेर बसेको छ । सिंचाई सुविधा नभएकोले नेपालको अधिकांश भू–भागमा मौसमी बर्षाको भर पर्नु परेको छ । यस्तै सरकारले नेपाली युवाहरु जोसुकैलाई पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान छुट दिँदा मुलुकका लागि आवश्यक जनशक्तिको कमी हुन थालेको छ । जसको प्रत्यक्ष असर कृषि क्षेत्रमा पनि पर्न गएको र कृषि मजदुरहरुको कमीले अधिकांश खेतबारी बाँझो हुने अवस्था आएको छ ।
पछिल्लो समयमा भने सरकारले किसानलाई सहयोग गर्नेगरी विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याएको छ । किसानलाई मल, विउ, कृषि औजार, प्रविधी उपलब्ध गराउने, विभिन्न शिर्षकमा अनुदान दिने र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने गरेको छ । सरकारको पछिल्लो योजनाले व्यावसायिक किसानका लागि थोरै भएपनि राहत पुगेको छ तर त्यतिलेमात्र नेपालका सबै किसानलाई फाइदा पुग्दैन । मुलुकको सर्वांगिण विकास गर्ने हो भने यहाँका बहुसंख्यक जनताले अँगालेको कृषि पेशालाई टेवा पुग्ने गरी कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्दछ । त्यसका लागि गाउँका किसानलाई आवश्यक परेको बेला उन्नत मल, बीउ, प्रविधि र सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइनु पर्दछ । यसैगरी कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपजले बजार लैजाँदा नठगिने अवस्था सिर्जना गरिनु पर्दछ । वर्षभरी दुःख गर्ने किसानले त्यसको आम्दानीबाट गुजारा चलाउनै समस्या परेपछि पेशा छोड्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । कृषकलाई सहयोग र कृषि पेशालाई व्यवस्थित गर्ने हो भने मुलुकले काँचुली फेर्न धेरै समय लाग्दैन ।
आहार र बासस्थान सुधार
रौतहटमा गोली लागेर घाइते भएको अवस्थामा भेटिएको गैंडा चितवनमा ल्याएर उपचार गर्दागर्दै मरेको छ । भदौ ४ गते रौतहटको गैँडाटार जंगलमा चोर शिकारीले गोली हानी घाइते बनाएको अवस्थामा फेला परेको गैँडालाई भदौ ५ गते बिहान उपचारको लागि चितवन ल्याइएको थियो । टाउकोमा एउटा र पछाडिको भागमा सात वटा गोली लागेको गैँडालाई सुरक्षाका साथ चिकित्सकको निगरानीमा उपचार गराइएको थियो । उपचारका क्रममा निकुञ्जका स्वास्थ्यकर्मीले गैंडाको शरीरबाट गोली र छर्रासमेत बाहिर निकालेका थिए, उसमा केही सुधार पनि देखिएको थियो । तर, मंगलबार बिहान सौराहाको हात्तीसार नजिक घोलमा बसेको गैंडा कसैगरी उठ्न सकेन । त्यहीँ नै उसको प्राण गयो ।
चितवनमा तस्करले गैंडा नमारेको निकै लामो समय भएको थियो । चितवन निकुञ्जले गएको दुई वर्ष सन् २०१४ र २०१५ मा शुन्य चोरी शिकार वर्ष मनाएको थियो । चितवन निकुञ्जका अनुसार, गएको २०७१ वैशाख २१ गतेयता निकुञ्जमा एउटा पनि गैंडा चोर शिकारीहरुले मार्न सकेका थिएनन् । चोर शिकारीहरुले गैंडाको खाग तस्करीको लागि गैंडा मार्ने गर्छन् । कुनै बेला चितवनमा एकै वर्ष ३७ वटासम्म गैंडा चोरशिकारीले मारेको इतिहास छ । चोरीशिकारमा कमी आएपछि चितवनमा गैंडाको संख्या पनि बृद्धि भएको छ । सन् २०१५ मा गरिएको गैँडा गणनाको नतिजाले नेपालमा गैँडाको संख्या छ सय ४५ पुगेको देखाएको थियो । त्यसबेला चितवनमा छ सय पाँच गैँडा भेटिएका थिए । यस हिसाबले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालमा गैँडाको प्रमुख वासस्थान रहेको देखाउँछ । निकुञ्जमा गैंडाको संख्या बढ्दै जाँदा निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमात्र होइन, पर्सा वन्यजन्तु आरक्षहुँदै रौतहटसम्म गैंडा पुगिसकेको अवस्था छ ।
वन र वन्यजन्तु तथा जैविक विविधता संरक्षणमा नेपाल विश्वमै उदाहरणीय मानिन्छ । निकुञ्जका कर्मचारी, सुरक्षा दल, संरक्षणकर्मी र नागरिक समाजको सामुहिक प्रयासले नेपालमा दुर्लभ वन्यजन्तु गैंडा र बाघको चोरीशिकार घटेको र यिनको संख्या बृद्धि भैरहेको छ । नेपालमा गैँडा र बाघको मुख्य वासस्थान चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हो । यसमा अझै पनि गैंडा र बाघको संख्या बढ्न सक्ने सम्भावनाहरु छन् । तर, गैंडा र बाघको बासस्थान सुधार गर्नु, जंगलमाथि मानवीय चाप घटाउनु र निकुञ्जको सुरक्षा व्यवस्थामा सुधार ल्याउनु अत्यावश्यक भैसकेको छ । गैंडा र बाघजस्ता दुर्लभ वन्यजन्तुको संख्या बढ्ने तर तिनीहरुले आवश्यक आहार र सुरक्षित बासस्थान भएन भने बाध्य भएर निकुञ्ज बाहिर पुग्छन् । यस्तोमा चितवनको गैंडा रौतहटमा पुगेर घाइते बन्ने नियति फेरि दोहोरिन सक्छ ।
महोत्सवै महोत्सव, मेलैमेला
हरेक हिउँदमाजस्तै यस वर्ष पनि चितवन र वरपरका जिल्लाहरुमा विभिन्नखाले मेला र महोत्सवहरुको आयोजना गरिएका छन् । भरतपुरको केन्द्रीय बस टर्मिनलमा १० दिनदेखि चलेको भरतपुर महोत्सव समापनको क्रममा छ । आजदेखि भरतपुरमै पाँचदिने मत्स्य मेला शुरु भएको छ । चितवनको सौराहामा हरेक वर्ष सञ्चालन हुने अन्तर्राष्ट्रिय हात्तीदौड प्रतियोगिता एवम् हात्ती महोत्सवको धमाधम तयारी भैरहेको छ । यी सबैको समाप्तिसँगै चितवन महोत्सवको तामझाम शुरु हुन्छ । यसअघि चितवनको छिमेकी जिल्लाहरु नवलपरासीको कावासोतीमा कावासोती महोत्सव, लमजुङको बेसीसहरमा लमजुङ महोत्सव, तनहुँको दमौलीमा तनहुँ महोत्सव सम्पन्न भएका छन् । यसरी मध्य नेपालमा यतिखेर मेला र महोत्सवको चटारो छ ।
मुलुकभर आयोजना गरिएको मेला र महोत्सवको आ–आफ्नै खाले उद्देश्य, महत्व र विशेषताहरु छन् । भौगालिक हिसाबले तिनीहरु फरकफरक स्थानमा र त्यहाँका प्रदर्शनमा पनि विविधताहरु छन् । भरतपुरमा चलिरहेको भरतपुर महोत्सवको उद्देश्य स्थानीय उद्योग–व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्नु रहेको छ । आजबाट शुरु हुने माछा महोत्सवको उद्देश्य नेपाली माछाको बजारीकरण गर्नु हो । यसैगरी सौराहामा हुन लागेको हात्ती महोत्सवको उद्देश्य पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नु रहेको छ । त्यहाँ पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सघाउने खालका गतिविधिहरु प्रस्तुत गरिनेछ । हात्ती महोत्सवको क्रममा यसपालि अन्तर्राट्रिय हात्तीपोलोलाई सहभागी गराउने आयोजकहरुले बताएका छन् । चितवनको गौरव र गरिमामय प्रस्तुतिको नारा दिएर हरेक दुई वर्षमा आयोजना गरिने चितवन महोत्सव चाहीँ औद्योगिक तथा व्यापार मेला नै हो । यसैगरी विभिन्न क्षेत्र र स्थानमा हुने मेला र महोत्सवका आआफ्नै विशेषता र उद्देश्य छन् ।
जेसुकै नाम, जस्तोसुकै उद्देश्य राखेर आयोजना गरिएपनि यस्ता मेला र महोत्सवले स्थानीय तहको प्रचारप्रसार र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउँछन् । यस्ता मेला र महोत्सवले एकातिर हामी कहाँ भएका उत्पादन र सेवालाई बजारसम्म पु¥याउँछ भने अर्कोतिर नयाँ नयाँ क्षेत्रमा लगानीको लागि प्रोत्साहित गर्दछ । यस्ता मेला र महोत्सवको माध्यमबाट स्थानीय उत्पादकहरुले आफ्ना उत्पादनलाई ठूलो बजारमा लैजाने अवसर पाउँछन् । यसैगरी ग्राहकहरुलाई पनि यस्ता महोत्सवबाट आफूलाई आवश्यक सेवा र बस्तु सहजरुपमा उपलब्ध हुनेछ । तर, कतिपय मेला र महोत्सवबाट स्थानीयले भन्दा बाहिरियाहरुले नै फाइदा लिएका उदाहरणहरु पनि छन् । त्यसो हुन नदिन मेला र महोत्सवका आयोजकहरुले सोच्नु पर्दछ । यस्ता मेला र महोत्सवमा स्थानीयलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाउनु पर्दछ । समग्रमा स्थानीय व्यक्ति, सेवा र उत्पादनलाई टेवा पुगेमात्र तिनीहरु सफल भएको मानिनेछ ।
सरकारी अनुगमनको कथा
भदौ महिनाको दोश्रो साता, नेपालीका मुख्य चाडपर्व शुरु भएका छन् । हिन्दु नेपाली महिलाहरुले मनाउने तीज पर्वले झपक्कै ढाकिसक्यो । तीज लगत्तै दशैँ र तिहारको रमझम शुरु हुन्छ । यसैको सेरोफेरोमा तराईमा छठ पर्व, जनजातिहरुको ल्होसार र मुसलमानको इद पर्व पनि आउँछ । धेरै जाति र जनजातिको चाडपर्व नजिकिँदा बजारमा चहलपहल पनि बढ्छ । बजारमा ग्राहकको चहलपहल बढ्दा बस्तुको माग बढ्ने नै भयो । माग बढ्दा मूल्य बढ्ने बजारको सिद्धान्त नै हो । कतिपय व्यापारीहरु यसैबेला नबिकेका, न्यून गुणस्तरका र मिसावट भएका सामान बेच्न चाहन्छन् । केही व्यवसायीले अत्यावश्यक वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर अधिक मूल्य लिने प्रयत्न पनि गर्दछन् ।
हुन त हरेक वर्ष मुख्य चाडपर्वको अगाडि सरकारले स्थानीय प्रशासन कार्यालयमार्फत बजार अनुगमन गर्ने र खाद्य सामग्रीको मूल्यसूची टाँस्न लगाउने गर्दछ । तर, चाडपर्व सकिँदासम्ममा त्यो पानीको फोकाजस्तै हराएर जान्छ । यसवर्ष बजेटपछि नयाँ सरकार आयो, नयाँ सरकारले महङ्गी घटाउने, जनतालाई राहत दिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको घोषणाको बाबजुद यतिखेर उपभोग्य बस्तुको बजारभाउ आकासिएको छ । स्थानीय प्रशासन कार्यालयले ब्यापारीहरुलाई बारम्बार उपभोग्य वस्तुको मूल्यसूची टाँस्न भनेपनि त्यसलाई अधिकांश ब्यापारीहरुले कार्यान्वयन गरेका छैनन् । स्थानीय प्रशासनले केही खाद्य गोदामहरुमा छापा मार्ने, ससाना किराना पसलदेखि डिपार्टमेन्टल स्टोरमा अनुगमन गरेर कम गुणस्तरका, मिसावट भएका, म्याद गुज्रिएका र मूल्य तथा उपभोग्य मिति उल्लेख नगरिएका सामानहरु बरामद गरेको भएपनि त्यसबाट बजारमा कुनै सुधार हुन सकेको छैन । बजारमा उपभोग्य बस्तुको मुल्य आकासिएको छ, तर सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको सहुलियत कसले लिइरहेको छ ? आमउपभोक्ताले थाहा पाएका छैनन् । फलस्वरुप ठग र कालाबजारीले मौकामा चौका हान्ने र उपभोक्ताको ढाड भाँच्ने कार्यले निरन्तर पाइरहेको छ ।
अहिले नेपालको बजार केही सिमित व्यापारिक घरानाहरुको नियन्त्रणमा छ । उनीहरुले चाडपर्व आउनासाथ माल गोदाममा राखेर बस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्यवृद्धि गराउँछन् । सरकारले तिनलाई देखेपनि नदेखेजस्तै गरिरहन्छ । कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर कालोबजारी गर्नेहरुलाई कडा कारबाही नगरेसम्म महङ्गी नियन्त्रण हुन सक्दैन । त्यसको लागि सरकारले नै तत्परता देखाउनु पर्दछ । तर सरकारमा बसेकाहरुले त्यस्तो हिम्मत जुटाउन सकेका छैनन् । सरकारले अनुगमन गर्न पठाएको टोली बजारका ससाना किराना पसल, पान पसल, घुम्तीमा राखेको मासु पसल र सडक छेउका मिठाई पसलमै सिमित भएर फर्किने गरेका छन् । जसको कारण हरेक बर्ष एउटै कथा पुनरावृत्ति भैरहेको छ ।